Xukuumada somaaliya oo ka warbixin Godane 24 saac gudohooda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 5 September 2014 6 September 2014
Xukuumada Soomaaliya ayaa sheegtay inay socoto gunaanudka warbixin ay ka soo saari doonto weerarkii saddexdii bishan ee diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka ay ku qaadeen kolonyo uu la socday Hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Godane.
Hadal heynta ku saabsan weerarkaas ayaa ahaa mid aad u sii xoogeysanayay, iyadoo wali aan kala cadeyn in la dilay Hogaamiyaha Al-Shabaab iyo in kale, hase ahaatee wararkan ka soo baxayay weerarkan ayaa ahaa kuwo is khilaafsanaa oo marba marka ka dambeeya is burinayay.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre oo la hadlayay raadiyaha afka dowladda ku hadla ayaa sheegay in saacadaha soo socda ay shacabka Soomaaliyeed maqli doonaan war ay ku farxaan sida uu yiri.
“Waxaa rabaa inaan ku soo koobo in saacadaha soo socda wax ka yar 24-saac in xukuumada war ku aadan geerida iyo nolosha hogaamiyaha Shabaab aan soo saarno, shacabka soomaaliyeed iyo aduunyada nabada jecel waxay maqli doonaan war ay ku farxaan”ayuu yiri Wasiir Goodax.
Mar la weydiiyay kaalinta ay dowladda ku laheyd weerarkii ka dhacay nawaaxiga deegaanka Sablaale ee Gobolka Shabeelaha Hoose, ayuu tilmaamay in kaalin weyn ay ku lahaayeen weerarkaas, isla markaana la geliyo shaqo adag sidii xog ku aadan hogaamiyaha Shabaab lagu heli lahaa.
“Duqeyntaas wey jirtaa runtii duqeyn aad looga soo shaqeeyay oo waqti iyo shaqo iyo xog uruursi la geliyay ayay aheyd dowladda soomaaliya kaalin aad u weyn ka qaadatay, iyadoo kaashaneyso shacabka, walina waxaa socda gunaanidkii warbixin xukuumada ay rabto inay ka soo saarto arrintaas”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Wakaaladaha wararka ee caalamiga ayaa siyaabo kala duwan uga hadlayay weerarkan uu sheegtay Mareykanka inuu ku qaaday Hogaamiyaha Shabaab.
Afhayeen u hadlay Pentagonga Mareykanka oo lagu magacaabo John Kirby ayaa xaqiijiyay in weerarkaas ay ku bartilmaameedsadeen Hogaamiyaha Shabaab, waxaana uu xusay inay wadaan xog uruurin ku aadan qasaaraha weerarkaas iyo hadii uu ku dhintay iyo hadii kale.
Sarkaal Mareykan ah oo la hadlay Telefishinka CNN oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in 80% ay ku kalsoon yihiin inuu geeriyooday Hogaamiyaha Al-Shabaab.
Axmed Cabdi Godane oo loo yaqaano C/raxmaan Abuu Zubeyr oo 37 jir ah ayaa ahaa Hogaamiyaha Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2008-dii, waxaana la sheegaa inuu ku soo tababartay dalka Afganistan.
Gaashaandhigga oo xaqiijiyay dilka hogaamiyihii Alshabaab Axmed Godane